ကင်ဆာရောဂါသည် သမီးလေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Entertainment – Local Celebrity – Duwun
ကင်ဆာရောဂါသည် သမီးလေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခိုင်နှင်းဝေ ဆေးကုပေးနေတဲ့ ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။
Myat 2018-04-06 11:52:34.0, 2018-04-06 11:52:34.0
ပရဟိတအလုပ်တွေကို အားတတ်သရော ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေက သူမ ဆေးကုသပေးနေတဲ့ အရိုးကင်ဆာရောဂါသည် သမီးလေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အရင်က အရိုးကင်ဆာကြောင့် ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ သမီးလေးဟာ အခုဆိုရင် နောက်ထပ်တစ်ဖက်ပါ ထပ်ပြီး ဖြတ်လိုက်တာကြောင့် ခိုင်နှင်းဝေခဗျာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။
သမီးလေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သူမရဲ့ ခံစားချက်လေးကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ယခုလို ပြောပြထားပါတယ်။
"ကျွန်မဆးကုသပေးနေတဲ့ အရိုးကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့သမီးလေးဆီဒီနေ့အပြေးလေးသွားခဲ့ရတယ်။ မနေ့က သူခွဲခန်းထပ်ဝင်ရတယ်၊ မနေ့က ကျွန်မအလှူလုပ်နေတာနဲ့ မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ သူလေးရဲ့ကျန်တဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက် ပါထပ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်။
အခုဆိုခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးဖြတ်လိုက်ရပြီ.ကျွန်မသွားတော့အားတင်းပြီးပြုံးပြရှာတယ်.ရင်ထဲတော်တော်မကောင်းဘူး.မနေ့ကမှခြေထောက်ထပ်ဖြတ်ထားတော့ တော်တော်လေးနာနေရှာတယ်.ကျွန်မ သူ့အတွက်အရုပ်ကြီးဝယ်သွားပေးပြီး ဆေးဖိုးနဲ့လိုရာသုံးရအောင် သွားပေးတော့ သူအစာမဝင်လို့အစာလေးဝင်အောင်စားဖို့ချော့ပြောခဲ့ပေမဲ့ သူကဘာမှ မစားချင်ဘူးတဲ့.
ကင်ဆာဆေးတွေသွင်းနေရတော့ ခံတွင်းပျက်နေရှာတယ်.ပိန်လဲပိန်သွားတယ်.ကျမအားတင်းထားပါတယ်.ဒါပေမဲ့ သမီးလေး အမြန်ဆုံးနေကောင်း ကျန်းမာပါစေတော့.ခြေထောက် နှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့ ခြေထောက်အတုတပ်လို့ရပါသေးတယ်.ဘီးတပ်ကုလာထိုင်နဲ့သွားလို့ရပါသေးတယ်..ကင်ဆာဆဲလ်တွေ သာတခြားနေရာတွေထပ်မပြန့်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးကြပါနော်." ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
သမီးလေးအတွက် ခိုင်နှင်းဝေနဲ့ ထပ်တူသူမရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေဟာ ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူမတတ်စွမ်းသလောက် အားတက်သရောက် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photos : ခိုင်နှင်းဝေ FB